mShop - အခြားပစ္စည်းများ
Home> Digital> Digital ပစ္စည်းများ> အခြားပစ္စည်းများ
i just2e-cigarette set (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) Cloud ကြမ်းကြမ်းနဲ့ battery ခံတာဆိုရင် i juct2ပေါ့
smoking liquid electronic cigarette tobacco fruit flavor
Bluetooth Microphone (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) Bluetooth mic အလန်းစားလေးနဲ့ အိမ်မှာနေရင်းဟစ်မလား ....... အပန်းဖြေထွက်ရင်း ဘော်ဒါတွေနဲ့ Song လေးတွေသီဆိုမလား......
Lite 40W electronic cigarette (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) battery ကောင်းပြီး 40 W အထိ Cloud အလန်းစားတွေ ဖန်တီးပုံဖော်ရအောင်
Smok Stick V8 Vape Pen (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) battery လည်းခံ ၊အကြမ်းလည်းခံ ၊Cloud လည်းများများ ဆို Smok Stick V8 ပေါ့ဗျာ
Essential Vape Head 80 watt ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Moyuan MEET 250W VV Box MOD အကြမ်းခံ၊ရေစိုခံတဲ့ Device အသစ် Watt 250 အထိ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ Meetmod magic far
Electric Tools Set (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) အိမ်တွင်းသုံး Electric Tools Box
Essential Vape ( 240W, watt & mech mode ) So Stupid Smoker, Cloud အလန်းနဲ့ ဂိုက်ပေးကြမ်းစို့လား။
!!! Essential Vape !!! (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) So Stupid Smoker….ကဲ….စတူးပစ် မဖြစ်တဲ့ Vape နဲ့ အပီဝုန်းဖို့။
!!! Multi function Knife !!! (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) ဒီဇိုင်းဘာညာ ကာလာအနေအထားအရ ဘက်စုံသုံးပေါ့ဗျာ။
!!! Photo Ticket Printer !!! (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) Mini Photo Ticket Printer လေးတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ကျဖို့ သွားလေရာ မခွဲအတူ။
!!! Lady Safe !!! (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) အမျိုးသမီးများအတွက်တင်မကဘဲ ဘိုးဘွားမိဘတွေနဲ့ ကလေးငယ်များအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါတယ်။
Smart Mini Micro Phone (Special Discount) Smart Microphone လေးရှိရင် အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ သင် အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါပြီ....
Headset Sony ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ Extra Bass အသံကျယ်ပြီး ခိုင်ခဲ့ကျစ်လစ်ပေါ့ပါးခြင်း
ှSmart Watch (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) ဖုန်းပြောနိုင်ပြီး bluetooth System ပါရှိခြင်း ကြောင့် နားကြပ်နဲ့သီချင်းနားထောင် နိုင်ခြင်း
SUA Vapors Liquit (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) စိန်တစ်လုံးသရက်သီးကနေ အဆီအနှစ်ကိုရယူထားပြီး ကျန်းမာရေး E Liquit အရည်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားသော အရသာ
NASTY Juice (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) Strawberry,Lime,Grape ပေါင်းစပ်ထားသော ချိုအီမွှေးသောအရသာနဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အရသာ မသိဘူး သူမှသူပဲ
ShiSha Time Electric Cigarettes မီးခြစ် မလို အားသွင်းစရာမလို တစ်ကြိမ်ဝယ်ပြီးရင် အကြိမ် 500 သောက်လို့ရပါတယ်
BLOWEZPEN E Vape (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) ဆေးလိပ်အစား ရောဂါမရတဲ့ ဆေးလိပ်အစားထိုးလျှပ်စစ်ဆေးလိပ်လေးသောက်ရအောင်
Learning English USB OTG 16GB(ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) အင်္ဂလိပ် အခြေခံလေ့လာ သင်ယူဖို့ သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက်မရှိ တဲ့သူတွေအတွက် OTG Stick လေးကိုဆောင်ထားရုံပဲနော်
EVOD ဆေးလိပ်အစားထိုး E Vape (ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့) ရောဂါရစေတဲ့ ဆေးလိပ်အစား ရောဂါမရတဲ့ ဆေးလိပ်အစားထိုးလျှပ်စစ်ဆေးလိပ်လေးသောက်ရအောင်
မီးလင်း Spinner Speaker Bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးသီချင်းနားထောင်ရင်း မီးလင်းSpinner လှည့်ပြီးဆော့ရအောင် ဘော်ဒါတို့ရေ
Frozen ET (ဆေးလိပ်အစားထိုးဆေးရည်) ဆေးလိပ်တွင်ပါဝင်သောဆေးရွက်များသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်
E Vape (ဆေးလိပ်အစားထိုးပစ္စည်း) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကို စိုးဝါးစွာထိခိုက်စေပါတယ်
E vape ဆေးလိပ်အစားထိုးစီးကရက် (Delivery Free) မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာ စီးကရက်သောက်တာပေါ့။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ် စီးကရက်သောက်မှာပေါ့။
Bluetooth Speaker High Power Radio နားထောင်လို့ရပြီး Bass သံကျယ်ကျယ်နားထောင်နိုင်ပြီး အိမ်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ Bluetooth Speakerလေးနဲ့ Wave လို့ရပြီ ပေါ့
mini bluetooth earphone ဆရာလည်း ကျချင်တယ်..Bluetooth မှပဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အထာကျတဲ့ mini earphone လေးသာ အားကိုးလိုက်မှာ။
2 in 1 Phone Cable ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြိုးများခေါက်ခြင်း ပြတ်ခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ
Bluetooth Speaker(20% Discount) ခိုင်ခန့်တယ် အသံကြည်လင်ပျက်သားစွာကြားနိုင်ပါတယ်
USB Adaptor ကွန်ပြုတာနဲ့ဖြစ်စေ တခြားဖုန်းများနဲ့ joine ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါနော် Xiaomi အတွက် OTG လေးပါ
LED Plug (ဖုန်းအားသွင်းမီးပလက်ခေါင်း) ဖုန်းအားသွင်းရုံမက ညအိပ်မီးအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ပလက်ခေါင်းလေး
Night TacLight Totch(ညကြည့် ဓာတ်မီး) ရေစိမ်ခံ၊ ရေပူရေအေးဒဏ်ခံ,ကားတက်ကြိတ်လည်း မကွဲ,ရိုးရိုးဓါတ်မီးထက် အဆ၄၀ ပိုလင်း ၁မိုင်အထိပြေး, ၅မျိုး ပြောင်းထွန်းနိုင်တဲ့ဓာတ်မီး
စားပွဲတင်ရေမွှေးကျားသစ်ခေါင်း Good Price
ခေတ်မှီ ကားလေထိုးစက် အချိန်ကုန်၊ လူပန်းသက်သာစွာဖြင့် သင့်စိတ်တိုင်းကျမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
Eye Massage မျက်လုံးနှိပ်စက် သောကြာနေ့တိုင်း Promotion များစွာရှိပါသည်